Hooyo si arxan darro ah loo dilay xoolo ay diidday inay bixiso darteed
Ururka dilaaga ah ee cadowga u ah ummadda Soomaaliyeed ee al-Shabaab wuxuu dhawaan xaafad ka tirsan Muqdisho ku dilay habar waayeel ah taasoo ka biyo diidday amar uu ku soo rogay oo ku aaddan inay bixiso xoola nool oo uu ururku ugu yeero zakawaad.
Labo toddobaad ka hor inta la dilin habartaas ayay xubno ka tirsan ururkaas dilaaga ah waxay u soo direen taleefoon iyagoo ku amraya inay bixiso xoolaheeda laakiin wey ka biyo diidday amrkaas toogasho ayeyna ku dileen.
"Waa mujaahiddiinta, taleefoonka ma qabaneysaa ama ma qabaneysid,?" ayuu ahaa mid ka mid farriimadii ay taleefoonka ugu soo direen toddobaadyo ka hor inta aan la tooganin hooyadaas waayeelka ah.
Hooyadaan waxay tusaale u tahay uun kumannaan dad shacab ah oo ururka dilaaga ah uu toogasho ku dilo sanad walbo kuwaasoo eedda saaran keliya ay tahay inay diidaan inay bixiyaan lacago baad ah kuwaasoo si sharci darro ah loogu khasbo.
Xubnaha al-Shabaab ee hadda ka hor kasoo goostay kooxdaas dhiig-cabtada ah ayaa sheegeen in dhibaatooyin lixaad leh uu ku hayo dadweynaha tabarta yar ee leh ganacsiyada yar-yar oo aan kasoo kaban karin sakawaadka sida xaq-darrada ah looga uruuriyo ganacsigooda.
Isla xubnahaas soo goostay waxay sidoo kale sheegeen in lacagaha loogu talo galay samafalka ee ay bixiyaan hay'adaha ee ay siiyaan dadka saboolka ah ay iska xalaaleysteen al-Shabaab oo ay si cad uga dhacaan dadkaas masaakiinta ah ee iyaguba caawimaad u baahan.
Sidoo kale, ururka dilaaga ah ee al-Shabaab wuxuu lacago canshuur ugu yeer ah ka uruuriyaa gaadiidka xamuulka ee sidaan raashiinka samafalka ee loogu talo galay in lagu caawiyo shacabka ay waxyelleeyeen abaarrada iyo xilliyada fatahaaddada webiyada.
Waxaaba taas ka sii daran in isla lacagtaas laga uruuriyay dadka shacabka loo adeegsado in lagu xasuuqo oo lala beegsado qaraxyada aan kala sooca laheyn ee ururku maalin walbo la beegsado dadweynaha aan wax galabsan.